Cajiibka Islamabad Khabiir - Maxay Tahay Sidii Webka?
Waa 'xayawaanka' ugu muhiimsan in dadku ay naftooda ka walwalaan marka ay timaado gawaarida raadinta isbeddelku waa caarada. Haddii aad akhrisatay ku filan qodobbada wax-ku-ogeeysiinta mashiinka , waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in qorayaashu tixraacayaan mashiinka search engine inta badan. Waxa kale oo laga yaabaa in ay sidoo kale xuseen in shaqadooda ay tahay in lagu raadiyo boggaga internetka oo ay sii socoto si ay u sharxaan sida ay sidaas u sameeyaan.
Haddii aadan maqli karin xakamaynta mashiinka raadinta, waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso waxa calaamadda webka - hohe pr backlinks. Isku day inaad wax ka barato tixraacyada joogtada ah iyaga ayaa laga yaabaa inay yareeyaan wax yar. Maqaalka soo socda Michael Brown, oo ah khabiir sare oo ka socda Semt , ayaa isku dayi doona in uu ku dhex marsiiyo shabakad cad oo laga yaabo in uu hoos u dhigo heer kasta oo miyir-qabnimo ah oo wax ka baranaya caarooyinka ay kugu soo aruuriyeen.
Marka mashiinnada raadinta ay u baahan yihiin inay liiska bogga boggooda, waxay isticmaalaan barnaamij kombuyuutar ama algorithm si ay u galaan internetka si ay u raadiyaan macluumaadka qaab habaysan. Barnaamijka automated waxaa loo yaqaan magacyo badan. Waa calaamada webka, indha indheynta, boorsada, caarada, ama caarada. Barnaamijyada waxay qabtaan nidaam loo yaqaan 'web crawling' si loo hubiyo in dhammaan macluumaadka laga soo ururiyey bogagga shabakadda inay yihiin kuwo wakhtigoodu dhammaado. Sidaa darteed, naanaysta "caaro" ayaa u muuqata mid caqli gal ah..
Ujeedada ugu weyn ee kabriduhu waa inay abuuraan nuqul ka mid ah bogagga ay booqanayso si ay makiinadaha raadinta u falanqeyn karaan. Mishiinka raadinta ayaa markaa ka muuqda bogagga si ay u siiyaan dadka isticmaala natiijooyinka raadinta degdeg ah. Isticmaalka kale ee caarada ayaa ah dayactirka tooska ah iyo macluumaadka ururinta bogagga ay booqdaan. Waxay hubiyaan xiriiryada iyo inay ansixiyaan codadka iyo ereyada muhiimka ah ee laga helo goobahan. Xakameeyayaasha waxay ururiyaan xarumo ay ka mid yihiin meelaha ay booqdaan oo ku daraan liiska goobaha booqanaya. Hannaanka, waxay sidoo kale ku qanacsan yihiin goobaha asalka ah ee bixiyay xidhiidhada meesha ugu horeysa.
Mashiinno raadin ayaa isticmaala macluumaadka in kabriidyada laga soo ururiyo boggaga internetka si loogu daro natiijooyinka raadinta raadinta bogga ereyada muhiimka ah. Taasi waa meesha geeddi-socodka guud ee raadinta mashiinka raadinta ay hoos u dhacdo. Waa inaad hubisaa inaad ku darto ereyada muhiimka ah ee shabakadaha bogagga iyo lambarka koodhka shaqadiisa si fudud. Websaytka la isku qurxiyo wuxuu xaqiijiyaa dhaqdhaqaaqa istiraatiijiga ah oo dhaqso badan. Ugu dambeyntiina, shaqada caarada ayaa ah inay caawiso in la garto qodobbada u baahan in wax lagu fududeeyo gaar ahaan haddii qofku la shaqeeyo website-yada macaamiisha. Waa sababta ay dadku uga walaacsan yihiin caarada iyo bilaabida iyaga oo u fiirsanaya faa'iido u leh goobta. Waa inaad joojisaa naxdinta ku saabsan caarooyinka ku xariira boggaaga oo aad ku bilowdaan iyaga.
Mid ka mid ah shirkadaha bixiya adeegyada SEO ee macaamiisha online waa Volacci. Waa shirkadda ugu wayn ee Drupal SEO kaas oo ah mid aad u xiiso badan oo u go'ay macaamiisheeda. Waxay ballan-qaadayaan in ay qiime u yeeshaan ganacsiyada u-qora adeegyadooda. Kuwa badani waxay ku maalgeliyaan, kuwa badan ayaa rajaynaya inay iyaga la qaataan. Waxay xitaa bixiyaan si bilaash ah ilaa websaydhku u helo ganacsi muhiim ah. Haddii aad raadineyso adeegga internetka ee SEO, tani waa mid ka mid ah shirkadaha aad u baahan tahay inaad hubiso.